Vaovao - Ny maha-zava-dehibe ny fonosana
Product Packaging dia resahina ao amin'ny baoritra, boaty, kitapo, blister, inserts, sticker ary marika sns.
Ny fonosana vokatra dia afaka manome fiarovana sahaza mba hisorohana ny vokatra tsy simba mandritra ny fizotry ny fitaterana, ny fitehirizana ary ny varotra.
Ankoatry ny asan'ny fiarovana, ny fonosana vokatra dia mitana andraikitra lehibe ihany koa amin'ny fanaingoana ny vokatra, fampiroboroboana ny marika, fihaonana amin'ny filan'ny estetika ny mpanjifa ary ny fitakiana ara-tsaina dia manafaingana ny fandrosoan'ny varotra.
Ny fonosana vokatra dia ny zavatra hita maso amin'ny vokatra; Ilay mpandahateny momba ny vokatra; Ny fampisehoana ny sary sy ny toeran'ny orinasa.
Ny fonosana vokatra voalamina tsara dia fomba iray lehibe ahazoana tombony amin'ny orinasa iray. Ny fametrahana stratejika marina ary mifanaraka amin'ny famolavolana fonosana psikolojia ho an'ny mpanjifa dia afaka manampy ny orinasa hisongadina amin'ny vondron'ireo marika mpifaninana ary hahazo laza tsara.
Ny lalànan'ny DuPont dia nanondro fa ny 63% amin'ireo mpanjifa dia nanapa-kevitra tamin'ny fividianana ny vidiny araka ny fonosana vokatra ihany. Noho io antony io, ny toekarena eo amin'ny tsena ankehitriny dia antsoina matetika hoe toekarena manintona. Ny marika sy fonosana manintona ny maso ihany no azo ekena sy eken'ny mpanjifa ary navadika ho varotra.
Noho izany, ny orinasa rehetra dia tsy maintsy mitandrina tsara amin'ny fonosana fonosana amin'ny marika.
Ny vokatra rehetra dia manana fonosana tsy manam-paharoa, ary ny marika lehibe aza tsy mitsitsy vola amin'ny famolavolana fonosana tonga lafatra ho an'ny entany.
Miharihary fa tena ilaina amin'ny fonosana ny fonosana:
Ny fonosana dia karazana herin'ny varotra.
Androany dia feno vokatra isan-karazany ny tsena, fohy dia fohy ny fifantohan'ny vokatra tsirairay ary tsy maintsy misambotra sy mahazo ny mpanjifa ny fonosana rehefa mahita topy eo amin'ny talantalana izy ireo. Ny fonosana izay nampiasa tamin'ny fomba feno ny Design, Colour, Shape, Material hanehoana ny mombamomba ny Product, Brand and Company's Concept and Culture, no afaka manintona ny mpanjifa ary manome mpanjifa fiheverana tsara momba ny vokatra sy ny marika, avy eo mitarika ny hetsika fividianana. .
Ny fonosana dia ny herin'ny varotra izay tompon'andraikitra voalohany amin'ny fisarihana ny mpanjifa.
Ny fonosana dia karazana herin'ny famaritana.
Rehefa mahasarika ny mpanjifa ny fonosana ary azony tsara ny sain'izy ireo, ny fonosana dia tsy maintsy manana ny asany hampitana ny famaritana ny vokatra sy ny endri-javatra.
Ny fonosana vokatra dia tsy ny fisehoana lafo vidy tsara natao ihany fa tsy afaka miresaka momba ilay vokatra ihany koa.
Ny zava-bitan'ny tsenan'ny vokatra dia miankina amin'ny hatsaran'ny fonosana mampiseho ny endri-javatra sy ny fampahalalana amin'ny antsipiriany.
Ny fonosana dia karazana herin'ny marika.
Ny fonosana dia manana ny asany Marketing sy Branding. Izany hoe, ny fonosana dia afaka mampiseho ny mombamomba ny marika; amboary ny famantarana ny marika ary avelao ny mpanjifa hahatakatra ny marika Brand, fananana marika, ka mamorona sary marika.
Ao amin'ny maritrano branding, ny fonosana koa dia azo raisina ho iray amin'ireo loharano marika Brand.
Ny fonosana ho fampisehoana ivelany ny vokatra dia miantsoroka ny andraikitra amin'ny fahatsapana fa omen'ny orinasa iray ho an'ny mpanjifa.
Ny fonosana dia andraikitra lehibe amin'ny fanavahana ny vokatra. Izy io dia afaka mamorona ny endri-javatra marika ary amin'io no mahasarika ny mpanjifa ary anaovana ny varotra.
Ny fonosana dia karazana herin'ny kolontsaina.
Ny fon'ny fonosana dia tsy ny fisehoana ivelany sy ny fisehoana ivelany ihany, fa koa ny fananganana toetra amam-panahy sy toetra mahafinaritra.
Ny fonosana dia afaka mampiseho ny kolontsain'ny vokatra sy ny orinasa amin'ny fomba mahomby
Ny fonosana dia karazana herin'ny firaisana.
Ny fonosana vokatra dia miompana amin'ny mpanjifa, afaka mamaly ny fitakian'ny mpanjifa isan-karazany izy, mandritra izany fotoana izany mitondra ny herin'ny firaisana amin'ny mpanjifa.
Amin'ny ankapobeny, ny fonosana dia omena asa maro kokoa.
Ny fonosana dia mitana andraikitra lehibe kokoa amin'ny marketing sy ny marika.